Noocyada Android ee soo saari doona taleefan isku laaban 2019 | Androidsis
Waxaan ognahay muddo bilo ah in taleefannada casriga ah ee laalaabku ay ka mid noqon doonaan isbeddellada waaweyn sannadkan ku saabsan Android. Waqtigan xaadirka ah, noocyo kala duwan horumariyo taleefannadooda casriga ah ee isku laaban. Si tartiib tartiib ah ayaan u baranaynaa faahfaahin dheeri ah waxaana jira kuwo ay bilaabashadoodu aad u dhowdahay. Sidaa darteed, qodobkaan waxaan ku aruurineynaa taleefannada noocan ah ee aan filan karno inay yimaadaan sannadka 2019.
Tan iyo markii ay jireen warar badan oo ku saabsan laabashada taleefannada casriga ah illaa iyo hadda. Waxay ballanqaadayaan inay noqdaan wax kacaan ku ah Android. Sidaa darteed, way wanaagsan tahay in la ogaado xaaladda hadda jirta ee moodooyinkan ugu horreeya ee la filayo in lagu soo bandhigo 2019 suuqa.
Samsung waa sumadda in warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya taleefankaaga casriga ah ee isku laaban. Nasiib wanaag, soo bandhigidda ayaa ka dhici doonta gudaha kaliya laba toddobaad, sidaa darteed maahan inaan sugno waqti dheer si aan ula kulanno. Sidoo kale, waa suurtagal inay tahay aaladda aan hayno macluumaadka ugu badan ilaa iyo hadda. Kadib bandhigiisa bishii Nofeembar iyo dhacdo gaar ah CES 2019, kuwaas oo na siiyay xog badan oo ku saabsan qaabkan. Loogu yeeray inuu noqdo mid ka mid ah calanka ka muuqda Android sannadkan.
Intaa waxaa dheer, macluumaad cusub iyo xogo ku saabsan taleefankan casriga ah ayaa sii socda. Xaaladaha qaarkood, waxay ahayd shirkadda Samsung lafteeda oo noo soo dirtay macluumaadkan, sida fiidiyowga aad ku arki karto qalabka Isbuucaan. Laba toddobaad gudahood, 20-kii Febraayo, waxaan la kulmi doonnaa taleefankii ugu horreeyay ee isku laaban ee Samsung.
Huawei waa nooc kale oo ka mid ah noocyada Android ee ku shaqeeya taleefannadiisa casriga ah ee isku laaban. Nooca Shiinaha ayaa leh dhacdo loo qorsheeyay 24 ee bisha February, taas oo loo qaadan karo in aan awoodi doonno inaan ku ogaanno taleefankan. Boodhadhka ay ku xayeysiisay astaanta ayaa horeba u soo jeedinaya in aannu wajahno taleefan casri ah oo isku laaban Intaa waxaa dheer, toddobaadkan ugu horeysay taleefankan.
In kasta oo xaqiiqadu tahay in bilo la sheegay in Huawei u socdo ku soo bandhig taleefankeeda casriga ah ee isku laaban MWC 2019. A casriga ah oo sidoo kale noqon doona kii ugu horreeyay ee sumadda Shiinaha ah oo la yimaada 5G. Marka sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee ku shaqeeya Android si loo helo iswaafajin.
Bilood ka hor in wararka xanta ah ee ku saabsan jiritaanka taleefanka isku laabma ee ugu horreeya ee Xiaomi. Nooca Shiinaha ayaa ku biiraya liistadan soo saarayaasha Android ee ku shaqeeya taleefanka nuucaan ah. Sidoo kale, dhawaan fiidiyowgii ugu horreeyay durba waa lasoo dusiyay ku saabsan qalabkan. Fiidiyow aad ku arki karto nashqadda qalabkan, marka lagu daro habka ay u shaqeynayso nidaamka ay calaamadda Shiinaha u dooratay taleefankeeda casriga ah
Qeyb ahaan maahan wax layaab leh, maxaa yeelay waxaa la ogyahay in taleefankan isku laaban, ay leedahay Xiaomi lagu qoro caawimaadda Samsung, aagga bandhigga. Sidaa darteed, qalabkani wuxuu ballan-qaadayaa waxyaabo badan, taas oo shaki la'aan caddayn doonta taas sumaddu waa mid ka mid ah kuwa ugu hal-abuurka badan berrinkan. Hada ma ogin goorta nuucaan imaan doono.
Nooc kale oo Android ka shaqeeya oo hadda ku shaqeeya taleefan casri ah oo la laaban karo waa LG. Dhowr bilood ka hor in wararkii ugu horreeyay ay bilaabeen ku saabsan horumarinta taleefannadan casriga ah ee nooca Kuuriya ah. In yar oo ka mid ah macluumaad la taaban karo ayaa soo gaaraya, sida taariikhda suurtogalka xareynta moodelkan. In kasta oo aan shaaca laga qaadin CES 2019, haddana waxaa la filayaa inuu yimaado sanadka 2019 oo dhan.
LG wuxuu ku sharxi doonaa nidaam ka duwan noocyada kale ee Android. Tan iyo markii uu kiiskiisa, summaddu waxay ku sharxi laheyd taleefan shaashad labaad oo lagu dhejin karo. Taas oo u oggolaaneysa labanlaabidda cabbirka taleefanka. Inkastoo tani ay tahay wax aan wali la xaqiijin. Laakiin waxay ballanqaadaysaa inay tahay moodelkii ugu xiisaha badnaa.
Xaaladda Motorola, Waxaa na soo gaarayay xogo ilaa bishii Ogosto ku saabsan tan casriga ah ee isku laaban. Calaamaddu waxay horey u leedahay dhowr shati oo diiwaangashan, waana la qiyaasayaa taas waxay noqon doontaa nooc cusub oo halyeeygiisa RAZR ah. Illaa iyo hadda, in kasta oo ay hore u jireen bakhaarro, ma jiro macluumaad gaar ah oo ku saabsan imaatinkiisa. In kasta oo ay jiraan warbaahin ka faalloota in ay dhici doonto bisha Febraayo.
Laakiin, way iska cadahay inay imaan doonto sanadka 2019, taas oo ka dhigaysa liiska noocyada ku qoran Android-ka taleefanka isku laaban xitaa ka sii ballaadhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Waa maxay telefoonada isku laaban ee aan ku arki doonno Android-ka sanadkan?